Madaxii Ugu Horeeyay Ee Ergooyinka Shirwaynaha Xisbiga Oo Maanta Galay Xarunta Fiiq. - Cakaara News
Fiiq(CN) Arbaco.Oct.01.2014, Wararka naga soo gaadhaya magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Nogob iyo gudiyada kala duwan ee qaban qaabada shirwaynaha oo aan laxidhiidhnay ayaa sheegaya in ay hada gaadheen magaalada Fiiq ergooyinkii ugu horeeyay ee shirwayanaha xisbiga.
Sida aad wararkayagii hore kala socoteen Cakaaranews waxay gudiyadii kala duwanaa ee qaban qaabada shirwaynuhu dhamaysireen xulashadii ergooyinka iyo dhamaanba hawlihii diyaar garowga shirka.
Dhinaca kale wararka ka imanaya xarunta dhexe ee XDSHSI ayaa ku waramaya in wakhti xaadirkan ay guddigii qaban qaabadu ka xil guteen hawlihii lojistikada, jadwalka barnaamijka shirwaynaha, warbixintii iyo dhamaanba hawlihii muhiimka ahaa ee ay maal mahan ku hawlanaayeen gudiga qaban qaabada shirwaynuhu.
Shirwaynaha 8aad ee Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga Soomaalida Itoobiya ayaa hataan bilaabanaya iyadoo ay hada u qul qulayaan waftiyada iyo ergooyinka kala duwan ee shirwaynuhu dhinaca magaalada lagu qabanayo ee Fiiq. Waxaana lasheegay in ay gudigii qaban qaabadu si heer sare ah uga soo baxday dhamaan hawlahoodii shaqo ee ku aadanaa diyaarinta shirwaynaha 8aad ee xisbiga.